Shiinaha Customized Qalabka Alaabta Qalabka, Anti - Talooyin suunka, Soosaarka Strap Furniture - Dongguan Qiaofeng Hardware Products Products Co., Ltd
Qiaofeng wuxuu xooga saarayay alaabta waaweyn, laydhka, elektarooniga, alaabta caruurtu ku ciyaarto iyo warshado kale si loo siiyo alaabada balaastigga ah iyo agabyada kale.
Qiaofengwaxay bixin kartaa naqshad sameynta iyo soo saarista, cirbadeynta cirbadeynta, farsamaynta iyo isku-dhafka adeegyada isku-dhafan.
Waxaan ku siin karnaa karti sare iyo xal dabacsan macaamiisha khadadka kala duwan ee adduunka oo idil.
Macaamiisha shirkadda ee adduunka oo idil, waxayna si daacad ah u rajeynayaan inay kula shaqeeyaan!
Qalabka khaanadda guryaha ABS
7 * 30mm PE fur ballaarinta
Ilaaliyaha geeska sanduuqa balaastigga ah ee 120mm
Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga ah Co., Ltd.
Dongguan Qiaofeng Caaga Qalabka Qalabka Co., Ltd, oo la aasaasay 2008.Since markii la aasaasay, shirkaddu waxay diiradda saartay alaabta waaweyn, nalalka, elektaroonigga, alaabada carruurtu ku ciyaarto iyo warshadaha kale si ay u bixiyaan alaabada caagga ah iyo qalabka ka soo baxa. qalabyada, alaabta guryaha leh Darawalka Laaciyada Leedhka ah, Alaabada kahortaga caarada, barroosinka qalabka guryaha, cagaha isbarbardhigaya, ilaaliyaha geeska balaastigga ah, Xakamaynta fog, Lampshade, xarigga xargaha, qaybta, Furniture / Laydhka / Xidhiidhka elektarooniga ah iyo qalabka dhejinta, iwm Hadda waxaan u adeegnaa macaamiisha adduunka oo dhan. Shirkaddu waxay leedahay mashiinno wax lagu duubo oo dheeri ah iyo qalab wax soo saar caag ah oo caag ah, oo bixin kara adeegyo isku dhafan oo naqshadeynta caaryada iyo wax soo saarka, wax taaj oo kale oo wax lagu duubo, ka shaqeynta iyo wax soo uruurinta.Waxaan sidoo kale aqbalnaa amarka OEM / ODEM iyo xirmada. waxaan ku siin doonaa qiimaha iyo adeegga ugu fiican.
Qalabka qalabka balaastigga ah ayaa badanaa loo isticmaalaa nolosha, qalabka guryaha qaarkood ayaa loo isticmaali doonaa, laakiin sidoo kale door aad u muhiim ah, qalabka guryaha ee xafiisyada badanaa waxaa loola jeedaa qalabka guryaha ee ku habboon xafiiska, rakibaadda iyo soo saaristu wali waxay u...
Weydiimaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood. Waxaan bixin doonaa qiimaha iyo adeegga ugu fiican.